Madaxweynaha Galmudug oo caawa gaaray Cadaado iyo Xildhibaanadii Muqdisho ka yimid oo… | Sagal Radio Services
Sagal Radio Services • News Report • June 24, 2019
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa goor dhow oo caawa gaaray magaalada Cadaado oo aheyd xaruntii hore ee Kumeel gaarka aheyd ee lagu dhisay Maamulka Galmudug.
Sida wararku sheegayaan Madaxweyne Xaaf ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay Cadaado, waxaana looga hortagay banaanka magaallada, kaddib markii uu safar dhulka ah uga yimid deegaanka Godinlabe oo uu xalay ku hoyday.
Madaxweyne Xaaf ayaa waxaa u soo galbiyay magaalada Cadaado Xildhibaano ka tirsan Labada Gole oo maanta ka ambabaxay Muqdisho, si ay Madaxweyne Xaaf ugu qanciyaan inuu Cadaado yimaado, kaddib markii uu ka soo tagay Dhuusamareeb.
Wararka laga helayo Cadaado ayaa sheegaya in Madaxweyne Xaaf oo ay la socdaan xubno ka tirsan maamulkiisa waxaa ay kulamo la leeyihiin Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare Abshir Bukhaari iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka ee ay ka mid yihiin C/raxmaan Odawaa iyo Xildhibaan Cabdi Saabir.
Sidoo kale Madaxweyne Xaaf ayaa berri la kulmi doona maamulka deegaanka, waxgaradka iyo bulshada ku nool Cadaado, isagoo kala hadli doono marxalada siyaasadeed ee ay gashay Galmudug, kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu buray heshiiskii Jabuuti ee ay la galeen Ahlusuna.
Magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa caawa waxaa ka socda dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed, iyadoo Dhuusamareeb uu ku sugan yahay wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, kuwaasoo kulamo la leh Xubnaha Hoggaanka Ahlusuna.